Banyere Anyị - Shanghai SOG nfuli Co., Ltd
Shanghai SOG nfuli Co., Ltd. e hiwere na 2005. Ọ na-raara Nlụpụta elu-edu nfuli na aku na-enye "elu-edu, elu-arụmọrụ, ume-azọpụta, na gburugburu ebe obibi-enyi na enyi" pumps.It bụ otutu eduga ụlọ ọrụ na china na ubi nke igwe anaghị agba nchara centrifugal mgbapụta na submersible nsị mgbapụta.
SOG si eduga ngwaahịa bụ CDL & CDLF usoro vetikal anaghị agba nchara multistage centrifugal mgbapụta, CHL & CHLF usoro kwụ anaghị agba nchara multistage centrifugal mgbapụta, CQB & ZCQ usoro anaghị agba nchara magnetik mgbapụta, ih & CZ & ZA usoro anaghị agba nchara chemical mgbapụta, QBY usoro diaphragm mgbapụta, WQP usoro anaghị agba nchara Submersible nsị mgbapụta, WQGS usoro arọ-oru ọnwụ nsị mgbapụta, SGL & SGW usoro pipeline centrifugal mgbapụta na mgbapụta usoro na ịchịkwa system.which e ọtụtụ-eji residential, azụmahịa na ụlọ ọrụ mmepụta mmiri iga. Industrial oke mmiri ọgwụgwọ, gburugburu ebe obibi-echebe, na mmiri na nsị na mmiri ọgwụ ndị ọzọ ubi.
" SOG ka mmiri ọzọ ebube " Iji nweta elu-edu mgbapụta si ọkachamara, SOG edu mba ụkpụrụ, integrates elu oru ego, na-mgbe niile na nkà na ụzụ mgbanwe na innovations mma mgbapụta nke nkà na ụzụ larịị. " Quality abịa site ọrụ, ime ihe n'eziokwu na-emepụta uru, ma na-asọpụrụ bụ mmeri mmeri n'ọdịnihu " bụ isi uru nke SOG. Provid ahịa na-eri-irè nfuli na ọrụ bụ isi ibu ọrụ nke anyị.
Ike n'Ezi bụ ntọala nke enterprise, r espect bụ ntọala maka udo imekọ ihe ọnụ. Anyị na-akwanyere onye ọ bụla metụtara na-achọ n'aka, na-achọ na-ala mgbe ewu iche, na nweta mmeri-mmeri pụta n'etiti ahịa, ọrụ, na mmekọ na mmepe. nke mere na ewu a na-adigide ụlọọrụ uru yinye.
Na-atụ anya ọdịnihu, SOG ga-anọgide na-azụlite mba ụlọ ọrụ. Na mmụọ nke nweta ọhụụ nke " Mee a na-akwanyere ùgwù enterprise ". SOG na-agba mbọ ka mma na itinye n'ọrụ maka mmiri na ego na ụmụ mmadụ na gburugburu ebe obibi ...